Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Xullo qasabad biyo-badbaadin ah oo shaqooyin badan qabata oo la jaanqaadaysa heerarka nolosha casriga ah
2020 / 10 / 26 QoondayntaTilmaamaha qasabada 5475 0
Tuubada ayaa qaada wadada horumarka xirfadeed
Marka lagu dhaqmayo hagaajinta guriga, runtii waxaa jira xirfado badan, ma ahan oo keliya heerarka tayada qurxinta, laakiin sidoo kale xirfadaha lacag uruurinta. Dad badan ayaa ku sameeyay tirakoob xirfadeed tan, sida halka aad ka fiirsan karto inaad lacag dhigato, iyo halka aadan ka fikiri karin inaad lacag dhigato, ayaa sida ugu fiican u fiican. Tani waa xulasho ay dadka u keeneen waayaha nolosha. Runtii kani waa kiiska. Waa suurtogal in la raadsado naqshad aad u sarreeya oo dhammaystiran. Sidoo kale waa in lagu daraa xaqiiqda si loo gaaro baahiyaha ugu badan ee la taaban karo. Isla mar ahaantaana, waa wax qurux badan oo leh adkeysi wanaagsan. Tuubada ayaa ah meesha ugu lacag yar.
Musqusha iyo jikada ayaa ah meelaha qasabadaha laga isticmaalo, laakiin shaqada biyaha la xiriirta waxay diiradda saareysaa tayada iyo qaabeynta qaabeynta dhabta ah. Doorashada qasabadaha ugu dambeeya ee biyaha lagu keydiyo waa doorashada ugu moodada badan iyo doorashada ugu wax ku oolka badan. Tuubada lacag ma keydin karto. Ugu horreyntii, waxaa loo isticmaalaa marar badan. Badeecada ugu fiican waa in la xushaa si loo hubiyo in aan si joogto ah loo dayactirin si looga fogaado inay saameyn ku yeelato isticmaalka nolosha dhabta ah. Intaa waxaa dheer, qasabaddu waa diiradda biyaha gudaha waana inay noqotaa mid xirfad badan leh. Tayada ayaa ah wadada kaliya ee lagu gaaro heerarka ka faa iideysiga wanaagsan. Kaydinta biyaha sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah alaabooyinka cusub ee shaqooyinka badan ka shaqeeya. Marka loo eego xulashada dhabta ah, astaamaha sheyga laftiisa waa iska cadahay, iyo heerarka biyaha lagu keydsado ayaa aad u baahan, oo aan kaliya loogu baahnayn keydinta qoyska. Sidoo kale waa baahi muhiim ah in tamarta laga badbaadiyo deegaanka guud.
Qaadashada wadada horumarka xirfadeed, qasabadaha wax soo saarka fayadhowrka ayaa aad iyo aad ugu fiican naqshadeynta. Dhexdooda, naqshadeynta shaqooyinka badan lafteeda waxay leedahay astaamo xirfadeed oo xoogan waxayna buuxisaa baahiyaha heerarka nolosha casriga. Qaabka loo yaqaan "Chic", naqshad wanaagsan, iyo hawlo badan ayaa lagu dhex daray mid, kaas oo ku habboon nolosha iyo keydinta biyaha iyo hufnaan.
Hore:: Nooca qasabada musqusha iyo dayactirka qasabada musqusha Next: Matte Black jiido Down Jikada qasabad